UPDATE: Maxaa natiijo ah oo ka soo baxay maxkamadeyntii maanta ee Wasiirka Amniga Jubbaland Janan? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Maxaa natiijo ah oo ka soo baxay maxkamadeyntii maanta ee Wasiirka...
Muqdisho (Halqaran.com) – Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa maanta waxaa la horgeeyay Wasiirka Amniga Maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan oo dowladda Soomaaliya 21-kii Bishaan August ay ka soo xirtay Garoonka Diyaaradaha Aadan Caddae Xilli uu la socday Diyaarad.
Kiiska Cabdirashiid Janan ayaa wuxuu la xiriiraa eedeymo ku saabsan tacadiyo kala duwan uu ka gaystay Gobolka Gedo, waxaana maxkamadda lala geeyay Sarkaal ka tirsan Ciidamada dowladda oo lagu magacaabo Buule Aadan Maxamed.
Fadhiga Maxkamadda ayaa maanta wuxuu ahaa dhageysiga eeda loo haysto Cabdirashiid Janan, waxaana Booliska ay sheegen inay soo dhammeystiri doonaan Dambiyada lagu haysto Wasiirka Amniga Maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan.
Sarkaalka maanta maxkamadda lala geeyay Cabdirashiid Janan ayaa waxaa lagu magacaabaa Buule Aadan Maxamed oo ahaay Taliyihii Ciidamada dowladda ee Degmada Doolow ee Gobolka Gedo.
Dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Jubbaland, ayaa waxaa ka dhaxeeya Khilaaf ku aadan dhanka Siyaasadda, islamarkaana dowladda waxa ay xayiraad saartay Magaalada Kismaayo.
oo maxkamad la soo taagay